Melissa Ballesteros ama sida loo sawiro sida Bruce Timm oo aan loo dhiman isku dayga | Abuurista khadka tooska ah
Horraantii 90-meeyadii, ayaa animation Mareykanku wuxuu ku jiray mugdi. Ma ahayn wax ka yar. Manga-ga Japan wuxuu gaarayay guryaha adduunka oo dhan, oo leh alaab aad u firfircoon iyo xiriir aad u wanaagsan oo u dhexeeya taariikhda iyo sawirka, iyo taxaddar weyn si loo hayo taageerayaasha taxanaha. Gadaal ah xilliyadii taxane ah sida GI Joe, He-Man, Sheera, Maaskaro, dhammaantood waxay ka tirsan yihiin fransiisyo ay ku ciyaaraan calaamadda toy, ama kuwa kale sida Don Gato, Dragons iyo Dungeons ama xitaa taxanaha ah Disney. Ilaa Batman waxaa qoray Paul Dini iyo Bruce Timm.
Dhamaan sawirayaasha laqabsaday qaabka Tim iyada u gaar ah, reer Mexico Melissa ballesteros waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican, la qabsiga foomka 'Great Bruce' si uu u sawiro dumarka, kala badh u dhexeeya sawir jooji ee 50-meeyadii iyo 60-meeyadii iyo sawirada Hanna barbera. Maanta waxaan kuu keenay Melissa Ballesteros ama sida loo sawiro sida Bruce Timm oo aan u dhiman isku dayga.
Kuligood way wada gaboobeen, bilaa nimco, waxayna ku buuqeen soo noqnoqoshada animations ama tabaha carruurta si ay u buuxiyaan waqtiga, marka loo eego taxanaha sida Ranma 1/2 o Dragon Ball, kaas oo calaamadeeyay safka hore ee animation tobanka sano ee cusub. Qoraal hore, waxaan ku aragnay Bruno Wagner ama sida loo sawiro ilaahyada, fanaan qaab weyn.
Batman taxanaha animated calaamadeeyay cad ka hor iyo ka dib la xiriira ee animation Mareykan, oo leh qaab aad u cad, oo leh qoraallo aad u adag iyo dheecaan iyo sawir madadaalo leh, iyo sidoo kale halis iyo gimmicky. Sawiridda Bruce Timm, wuxuu noqday halbeeg lagu dhejiyo warshadaha dhexdiisa, isagoo noqonaya qaabkiisa sawir, qaab cusub oo loogu dhawaado garaafka ka dhex jira warshadaha majaajillada iyo sawir.
Melissa ballesteros waa sawirqaade ka socda magaalada Guadalajara, Mexico, oo ku leh faylalka ay leedahay sawirro aad u fiican iyo naqshad dabeecad, oo si fiican uga mid noqon kara warshadda Tim. Waxaan kaaga tagayaa sawirro taxane ah si aad u aragto socodkeeda shaqo.
Macluumaad dheeraad ah - Bruno Wagner ama sida loo sawiro ilaahyada
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Melissa Ballesteros ama sida loo sawiro sida Bruce Timm oo aan u dhiman isku dayga